के सलह मान्छेले खाना मिल्छ ? के छ फाइदा ? – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Health/के सलह मान्छेले खाना मिल्छ ? के छ फाइदा ?
के सलह मान्छेले खाना मिल्छ ? के छ फाइदा ?
कुनैदिन विश्वले चरम खाद्य संकट झेल्नेछ र भोकमरीको स्थिति आउनेछ । चामल, गहुँ, मकै जस्ता मूख्य खाद्यन्न सर्वत्र अभाव हुनेछ । त्यसपछि पेट भर्न वा बाँच्नका लागि मान्छेले किरा–फट्यांग्रालाई आफनो भोजन बनाउनेछ । के हामी आज यस्तो दिनको कल्पना गर्न सक्छौं ?
अहिले हामी एकसाथ दुई किसिमको परिस्थिती झेल्दैछौं । एक त, लकडाउनका कारण अन्न–उत्पादनको काम नराम्ररी प्रभावित भएको छ । खेतीपातीको मूख्य सिजनमै किसानहरु अनुत्पादक रुपमा घरभित्र थुनिएका छन् । अर्कोतिर सलह जस्ता फौजी किरा र लगातारको झरीले अन्नबाली सखाप पार्दैछ । यावत् प्रतिकुलताले भोलिका दिनमा विश्वले खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनले गर्दा अन्न-उत्पादनमा ह«ास आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । अर्कोतिर रासयनिक मल, विषादी आदिको कारण माटोले आफ्नो उर्बरा शक्ति गुमाउँदै गएको पाइन्छ । कृषि विज्ञहरुका अनुसार माटोलाई आवश्यक पर्ने पोटास घट्दै जानु र एसिडको मात्रा अत्याधिक बढ्नुले माटोले उत्पादन क्षमता गुमाउँदै गएको छ ।
एकातिर खाने मुख अर्थात जनसंख्या बढ्दै जानु, अन्न–उत्पादनलाई अनेक भेराइटी बनाउन प्रयोग गरिनु, माटोको उर्वराशक्ति घट्दै जानु, जलवायु परिवर्तन हुनु जस्ता अनेकन कारणले भोलिका दिनमा हामीले खाद्य संकट झेल्नुपर्ने हुनसक्छ ।
एक अध्ययन अनुसार मूख्य खाद्यन्नको रुपमा रहेको धान, चामल, मकै जस्ता अन्न उत्पादन समेत घट्दै गइरहेको छ । त्यसमाथि अहिलेको जस्तो प्राकृतिक विपत्तीले यसलाई थप असर गरिरहेको छ । कोरोनाको कारण विश्वव्यापी रुपमा गरिएको लकडाउन होस् वा अन्नबालीमा सलहको तिब्र आक्रमण, यसले हाम्रो खाद्य भण्डारमा संकट पैदा गर्ने जोखिम छँदैछ ।
त्यसो त विगतमा सलह जस्ता किराकै कारण भोकमरीको स्थिति भोग्नुपरेको कथाहरु सुन्न÷पढ्न पाइन्छ । नेपालमा पनि सलहले बालीनाली सखाप पारिदिएपछि भोकमरी लागेको घटनाहरु सुन्न पाइन्छ ।
घतलाग्दो कुरा के भने, विगतमा सलहकै कारण भोकमरीको अवस्था आएको पढ्न÷सुन्न पाइन्छ भने भोकमरीबाट बच्न सलहलाई मान्छेले आफ्नो भोजन बनाएको उदाहरण पनि पाइन्छ । कुनैबेला खाद्य संकटबाट जुधिरहेको यमन र ओमानले सलहलाई नै प्रोटिनको रुपमा खाने गरेको इतिहास छ ।
के हुन्छ फट्याङ्ग्रामा
त्यसो त पश्चिमी मुलुकका कतिपय शाकाहारी मानिसहरु पनि किरा खान सुरु गर्दैछन् । उनीहरुलाई विश्वास दिलाइएको छ कि, फट्याङ्ग्राले दुखाई अनुभव गर्दैन । हुन त यसलाई पुष्टि गर्ने रिसर्च अहिलेसम्म भएको छैन । यद्यपी वैज्ञानिकहरुले किरा कल्याणका शोध सुरु गरिसकेका छन् ।
पछिल्लो समय चीनको वुहानबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलियो र यसले विश्व मानव समुदायलाई आच्छु–आच्छु बनायो, बनाइरहेकै छ । कोरोना भाइरस किन र कहाँबाट फैलियो भन्ने सन्दर्भमा धेरैको अनुमान थियो, चमेरो र सालक यसको कारण हुनसक्छ ।
खासमा चीनको वुहान क्षेत्रमा चमेरो, सालक जस्ता जीवको मासु खाने गरिएको र त्यही माध्यामबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको मानिन्छ । यही कुरालाई आधार मानेर कतिपयले के तर्क गरिरहेका छन् भने, मानव शरीरका लागि प्रकृतिले जुन–जुन खानेकुरा उपलब्ध गराएको छ, त्यही मात्र खानुपर्छ । शरीर र पाचन यन्त्रको प्रकृतिलाई हेरेर मान्छेलाई ‘शाकाहारी भोजन’ मात्र उपयुक्त हुन्छ । जीवजन्तुको मासु वा अप्राकृतिक खानेकुरा मानव शरीरका लागि अनुकुल छैन । आज जे–जति रोग लागिरहेका छन्, त्यसमा यस्तै अप्राकृतिक खानेकुरा मूख्य कारण हो भनिदैछ । यस्तो अवस्थामा किरा फट्याङ्ग्राले हाम्रो भोक टार्नेछ वा अरु रोग र संक्रमणको दलदलमा फसाउनेछ ?
सरकारी कार्यालयका हाकिम ११ लाख पैसा बोकेर होटलमा के’टीसंग म’स्ती गर्न पुग्दा !
चर्चित हास्यकलाकार मनोज गजुरेल र नायिका बर्षा सिवाकोटी विवाह गर्दै
पाँच तारे होटलमा चर्चित अभिनेत्रीले कोठी चलाएको पर्दाफास…